Oppo A9 2020: ndị a bụ nkọwapụta ya | Gam akporosis
Oppo A9 2020: ndị a bụ nkọwa nkọwa ya
Oppo ga-alaghachi n'oge na-adịghị anya, ọ ga-anọnyere ya Oppo A9 2020, nke na-agaghị ere ere n'afọ ọzọ, mana na nke a. Ekpughelarịrị ọtụtụ isi atụmatụ nke ekwentị a, yabụ ọtụtụ n'ime nkọwapụta ọrụaka ya adịghị ezo ezo.
Ọnụ a ga-enwe otu n'ime ndị na-arụ ọrụ Qualcomm kachasị ọhụrụ nke ezubere na mpaghara nke etiti. Kedu ụdị usoro ikpo okwu anyị na-ekwu maka ya? Nke a na ndị ọzọ bụ nkọwa zuru ezu n'okpuru.
Site na Facebook, Oppo bipụtara mbipụta nke nwere ozi gbasara ụfọdụ nkọwa nke A9 2020. N'ime ya, nke bụ nke anyị chọtara n'okpuru, ị ga - ahụ na ọ ga - akụ ahịa ahụ na nhazi Snapdragon 665 site na Qualcomm, nke nwere ike iru elekere elekere kachasị nke 2.2 GHz ekele maka isi Kyro 260 ya anọ na arụmọrụ nke 1.8 GHz ekele maka isi ya ndị ọzọ Kyro 260. Nke a 64-bit architect chipset, cheta, ejiri ya na usoro 11nm na jikọtara ya na Adreno 610 GPU.
OPPO A9 mượt má hoàn thành mọi thao tác với chip Qualcomm Snapdragon 665, kết hợp với RAM 8GB siêu lớn. Bộ nhớ 128GB…
Ihe si OPPO en Sọnde, Septemba 1, 2019
Nhazi nke ebe nchekwa RAM na ebe nchekwa nke a ga - enye ya bu 8GB na 128GB, karị. Agbanyeghị, anyị nwere olile anya na a ga-enwe ụdị ọzọ dị iche, opekata mpe, nke ga-abụ 6GB na 64GB.
Akwụkwọ ozi ọzọ na-agbagharị agbagharị na-ekpughe nke ahụ Ọ ga-abata na batrị 5,000 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na igwefoto quad 48 MP, nke a na-atụ anya na ọ ga-eji 8 MP, 2 MP na 2 MP sensọ. Na mgbakwunye na nke a, a na-ekwu na ihuenyo ga-abanye Oppo A9 2020 ga-abụ 6.5 sentimita diagonal na mkpebi HD + nke 1,600 x 720 pikselụ. Nke ikpeazụ ahụ na-akụda ntakịrị, ọ bụghịkwa n'ihi akụkụ nke ebughibu, mana n'ihi mkpebi ahụ; Anyị na-atụ anya na data a ezighi ezi, kama nke ahụ, panel ahụ na-enye nkọ nkọ FullHD.
Ebumnuche a ga-ebido iji ya merie ya Xiaomi My A3, ọ bụ ezie na a maghị mgbe. Anyị na-echere ozi ndị ọzọ gbasara nnweta na ọnụahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo A9 2020: ndị a bụ nkọwa nkọwa ya
Playlọ Ahịa Google Play ga-amalite igwu vidiyo na-akpaghị aka na ngwụcha ọnwa
Plagbọ elu Flight Pilot Simulator bụ ihe nkedo ụgbọ elu nwere ihe karịrị 150 km² nke mpaghara